PPGI uu saqafku dumo
GI uu saqafku dumo
CRC uu saqafku dumo
Rinji Al gariiradda
Tianjin bir Liwei & steel co., Ltd waxaa la aasaasay sannadkii 2002, oo ka diiwaan gashan Industry Airport Tianjin ku Park. ganacsiga ugu weyn ee Liwei waa in duurka ku of saarka, processing iyo Qaybinta alaabta birta. Products kala qaybsan yihiin saddex qaybood: taarikada bir, tubooyinka birta iyo rebar steel. taarikada bir ka mid ah qabow gariiradda giringiriyey steel (CRC), gariiradda bir kulul giringiriyey (HRC), gariiradda steel galvanized (GI) iyo coil steel galvanized prepainted (PPGI). tuubooyinka Steel ka mid ah tuubooyinka ERW, tuubooyinka dusha madow, tuubooyinka galvanized, tuubooyinka aan xuduud lahayn, tuubooyinka daawaha iyo wixii la mid ah.
Waxaan u qaybi alaabta birta suuqa gudaha iyo dibada labadaba. In suuqa maxalliga ah, Annagu waxaannu nahay shirkadda wakiilka ah ee ku daqiijin jireen bir weyn oo ay ku jiraan group steel Baotou, koox steel Hebei, koox steel Tiantie ah. Oo qaybiyo in ka badan 50,000 oo tan oo CRC, GI iyo PPGI sanad kasta. Our macaamiisha maxaliga ah waxaa lagu dhex firdhiyey oo dhan in ka badan gobollada Waqooyiga Shiinaha, iyo xajiyey iskaashi muddo dheer nala.
Shirkadda Our gaadhin ansixinta dejinta iyo dhoofinta ee sanadka 2008, iyo ganacsiga dhoofinta ayaa haatan sii kordhaya. Buugga soo saarka ee dhoofinta ka mid ah CRC, GI, PPGI, safeexado iyo tubooyinka birta. Macaamiisha ka Eastern Europe, South America, Mideast oo Africa ku adkeeyey xiriirka ganacsi ee deggan oo dheer nala. Waxaan ballan macaamiisheena tayada fiican, qiimo macquul ah iyo dhalmada degdeg ah.
"Honest, daacad, Trust iyo Ixtiraamka" waa kala bixiyc ganacsiga. Waxaan rajeynaynaa in aan qeybinayay soo saarka iyo adeegyada ugu fiican ee dhammaan macaamiisheena xurmayn.
Ciyaarta ayaa ku guul-guul u dhexeeya shirkadda iyo shaqaalaha, shirkadda iyo macaamiisha bartilmaameed orodka our. Waxaan rajaynaynaa in aan sameyn karno qaybinta in daryeelka bulshada oo dhan ka dib guusha ganacsiga.
2-2-1404, No. 2, Chuangxinliulu, Huayuan Hi-Tech Industrial Park, Tianjin, 300384, Shiinaha